Jubaland oo dalbatay raalin-gelin xili ay diiday baaqa Beesha Caalamka
Dhinacyaddan ayaa dhowaanba waxay hawada isu marinayeen warqado furan.
KISMAAYO, Jubbaland – Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo ka jawaabay dalabkii Beesha Caalamka ayaa ku gacan-seyray tallooyinkii ay soo jeediyeen UN, AU iyo IGAD.
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD ayaa waxay codsadeen qodobo ay kamid yihiin;
-Dib u furidda diiwaan-gelinta murashaxiinta
-Xalinta tabashooyinka murashaxiinta
-Wax ka bedelida shuruudaha lagu xiray siyaasiyiinta xilka madaxweynaha
Isaga oo ka duulaya soo jeedintaasi, guddiga ayaa wuxuu dib u furay diiwaan-gelinta murashaxiinta, wuxuuna dib u dhigay maalinta la dooranayo madaxweynaha xiga.
Hasa ahaatee, qoraal kasoo baxay xafiiska ergayga UN-ka ee Muqdisho, James Swan, oo lagu xusay in uusan ku qancin isbedelkaasi ayaa su’aal geliyey in ay taageeri doonan natiijada doorashada.
Swan oo ku tartarsiiyey guddiga in ay dhaqan-geliyaan tallaabooyinka kale ayaa waxa uu sheegay in dadka Jubbaland "aysan u dhameyn" nidaamka ay haatan ku socoto doorashadda Jubbaland.
Warqad kale oo ku taariikheysan 18-ka August kana soo baxday guddiga waxaa si cad loogu shaaciyey in uusan jiri doonin isbedel dambe oo ay sameyn doonan, ayna qaban doonan doorashada.
"Tan koowaad, Guddiga wuxuu si wadar ogol ah isugu raacay in aysan jirin talaabooyin kale oo daruuri ah oo loo baahan yahay si loo horumariyo doorashadda. Tan labaad, guddiga wuxuu rumeysan yahay in dastuurka iyo sharciga Jubbaland uu u ogolaanayo in qabashada doorashadda. Sidaasi awgeeda, doorashada madaxweynaha waxay kusii soconeysaa sidda loo qorsheeyay," ayaa lagu yiri qoraalka guddiga.
Doorashadda madaxweynaha oo ay isu diiwaan-geliyeen murashaxiin uu kamid yahay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxaa lagu wadaa in ay qabsoonto 22-ka bishan August, sidda uu guddigu shaaciyay.
"Gabagabadii, guddiga iyo daneeyeyaasha waxay si xoogan u rumeysan yihiin in shacabka Jubbaland ay ku qanacsan yihiin geedi u socodka doorashadda, taasi oo kasoo horjeeda sida aad ku sheegtay warqadaadii [James Swan]. Waxaan wallaac iyo qalbi-jab aan ka muujinaynaa aragtida noocaasi ah; waxaan rumeysanahay in shacabka Jubbaland ay u qalmaan raaligelin ka timaada beesha caalamka oo ku aadan matalaada khaldan ee oraahdaasi," ayuu raaciyay guddiga.
Mowqifka adag ee uu qaatay guddiga ayaa waxaa nan la ogayn nooca ay noqon doonto jawaabta Beesha Caalamka xili dhinacyadda ay dhowaanhaba warqadda furan hawada isu marinayeen.
Soomaliya 12.07.2019. 20:53
Tiradda dadka la hubiyey in lagu khaarijiyey duulaankan qaraxa lagu bilaabay ayaa la shaaciyey.